Ọkụ kachasị mma na-eto eto - Ime Ụlọ Na-Eto Eto
Ọkụ kachasị mma na-eto eto
Ihe nkọwapụta zuru oke, PAR na etu ahịhịa si eji ọkụ
Lumens & Akụkụ
Yabụ, gịnị ka 'Igwe ọhụụ' pụtara n'ezie?
Isi Ihe Ndị to Ga-atụle
N'iji Ugwu zuru oke nke Ihie
Nke kacha mma: Fluence SPYDRx 340W
Uru Kachasị Mma: California Lightworks Solarstorm 440w
Na ọtụtụ ime ụlọ na-eto eto nhọrọ, karịsịa n'ahịa Ikanam, ọ ghọọla ihe mgbagwoju anya ịchọpụta nke na-eto eto ịzụta.
Ma ọ bụrụ na ịzụrụ ọkụ ọkụ zuru oke, ọ bụghị LED niile ka ewuru n'otu ụzọ. Ikwesiri ị attentiona ntị na ogo na oke nke ọkụ ihe ọkụkụ na-arụpụta ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịghọta ezigbo ike nke ọkụ ọkụ na-eto eto nwere ike inyefe gị kanopi.
otu esi ewu ebb na usoro onodu
N'isiokwu a, m ga - enyere gị aka ịchọpụta otu esi azụta ihe kacha mma zuru oke LED dị elu maka ego gị. Aga m eme nke a site n’inyere gị aka ịghọta ihe okwu dị ka Spectrum na PAR pụtara, otu ha si metụta ibe ha, yana otu ị ga - esi jiri ha họrọ akara ngosi LED zuru oke zuru oke ị nwere ike ịzụta maka ogige gị.
Nke a ga - akachasịsịsịsịsịsịsịsị anya na teknụzụ karịa ka ọ dị na mbụ, mana burukwa m. Site na oge ị gụchara edemede a, ị kwesịrị inwe obi ike iji mee nhọrọ nke gị.
Ọ bụrụ na ịchọghị ịma gbasara nkọwapụta ọrụ aka gị ma chọọkwa aro m, edepụtara m ha n'okpuru paragraf a. Ma ọ bụghị ya, gụọ ma banye n'ime ụwa nke ọkụ m.
Ọ bụghị ihe dị ọnụ ala na $ 900, mana Fluence SPYDRx bụ sistemụ ọkụ kacha mma zuru oke n'ahịa ugbu a.
Uru Kachasị Mma: California Lightworks Solarstorm 440
Gaghị ahụ ntọala LED kachasị mma maka ego ahụ. California Lightworks bụ otu n'ime ndị nrụpụta amaara ama.
Ọdịdị dị iche iche zuru ezu bụ okwu a na-ahụkarị nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ọkụ na-eji iji kwalite ụdị ihe atụ ha. Ha na-ekwukarị na Chlorophyll A na B absorption dị iche iche , nke ị maara nke ọma. O yikarịrị ka m ga-arụtụ aka na ikekwe ha amaghị na eserese dị otú a bara uru naanị maka chlorophylls ewepụtara ma ọ bụghị maka akwukwo ndụ n'onwe ya. Ma nke ahụ bụ akụkọ ọzọ.
Eziokwu doro anya bụ nke a: dịka ọ dị ugbu a, ọ nweghị ụdị dị iche iche dịnụ nke ga-ekwe ka 100w LED dochie 1000w HID. Nke a bụ n'ihi na ọ na-elekwasị anya na nsị chlorophyll. Ma ọ bụ ezie na osisi nwere ọtụtụ pigmenti na photoreceptors n'ofe PAR, ọ dịghị ihe ga-eti anapụta dị nnọọ mma ìhè mma na nke ukwu gị osisi.
Dị ka onye na-azụ ihe, anọwo m na-atụnyere otú ọkụ m na-eto eto si sie ike site na iji igwe lux. A lux meter bụ ngwaọrụ nke na-atụle njupụta nke ọkụ na-enwu gbaa (lumens) n'otu oge site na ntinye. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na a na-atụle ọkụ na-eto eto maka ahịhịa, ọ ga-abụrịrị na m na-eji PAR oge niile. Ma otu mita PAR.
Naanị ma ọ bụrụ na ịchetaghị, PAR na-anọchi anya 'radieshon na-arụsi ọrụ ike na foto.' Ọ na-ezo aka n'ọtụtụ dị iche iche nke ìhè site na 400 ruo 700 nanometers nke ọtụtụ osisi na-eji maka usoro nke photosynthesis. Maka ebumnuche anyị ihe dị iche bụ na otu mita PAR na-etinye ọkụ nke ọkụ n'ime usoro ahụ dum. Ezie na a lux mita (lm) na-emekarị calibrated naanị n'ihi na ndị na-enwu gbaa wavelengths na anyị na ụmụ mmadụ nwere ike ịhụ, ebe na-acha ọcha na-acha odo odo ìhè na-hụrụ dị ka ndị kasị ufiop, mgbe na-eleghara ndị ọzọ wavelengths dị ka-acha anụnụ anụnụ na-acha uhie uhie nke nwekwara nnọọ uru maka osisi. Codka jamhuuriyadda soomaaliya
Maka ozi ndị ọzọ, gụọ edemede m banyere etu ọkụ si emetụta uto osisi.
esi chara n'onwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tomato ke ufọk
Ọdịiche dị n'etiti otu mita PAR & Lux si ele ike ọkụ. Rịba ama na usoro Lumens na-agbasikwa ike nke anya anyị.
Wayzọ anyị si ahụta ọkụ bụ ihe dịkarịsịrị elu na-enweghị isi maka ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-enwe mmetụta dị elu na gburugburu 555 nanometers. Anya anyi nwere nghota nke uche kari ebe onu ogugu nke uche anyi bu kwa ebe ihe ngosi kachasi puta diri osisi.
N'agbanyeghị m? Ezi! Na-ahapụ na-aga.
Ekwesịrị iji okwu ahụ mee ihe? Ọfọn, mgbe ụlọ ọrụ kpebiri ịkpọ ngwaahịa ha ọkụ ọkụ zuru oke, ha na-apụtakarị na ngwaahịa ha na-apụta oke, na-aga n'ihu ma dị mkpa n'ofe (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile) nke PAR. Ọ bụ ya. N'ezie, cheta nke a: 'Ọdịdị zuru ezu' dị ka okwu, bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi dịka onye na-emepụta Light Light. Ọ bụtụghị asambodo asambodo; ma iwu, ulo oru ma obu ndi ozo.
Nke bụ eziokwu bụ: dịka ọ dị ugbu a, ọkụ ọkụ na-eto eto na-aga n'ihu site na iji ụgbụ akpọrọ ma kama ụlọ ọrụ na-elekwasị anya n'inye ụdịdị dị iche iche kachasị elu. Can nwere ike ịhụ nke a ma ọ bụrụ na ị chọpụta na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-acha ọkụ ọkụ na-acha odo odo / na-acha odo odo ma na-edochi ndị LED ha na ibe 'ọcha'.
A na-emepụta mkpụrụ osisi ndị a na-acha ọcha site na usoro mkpuchi phosphor, ebe a na-etinye ihe mkpuchi ahụ na ọkụ ọkụ. The kpọmkwem ndò ma ọ bụ agba okpomọkụ nke na-acha ọcha ìhè na-emepụta na-ekpebisi ike site na-achị ebili isi nke-acha anụnụ anụnụ ikanam na mejupụtara nke phosphor. Na ọkpụrụkpụ nke phosphor mkpuchi na-amị ọdịiche dị na agba okpomọkụ nke diode.
Na na! Ugbu a na anyị maara otú e si eme ọmarịcha ọkụ ọkụ taa, anyị nwere ike ikwu maka 'ụdịdị dị mma'.
Ìhè na-eto eto nke zuru oke ga-abụ nke na-emetụta ụdịdị dị iche iche nke anyanwụ anyị, ma na-enye anyị ohere ịhazigharị ọkụ na mkpa anyị. Nke a ga-abụ oke nke “Egwuregwu zuru ezu.”
Maka ebumnuche anyị na ebumnuche anyị, ụdị dị iche iche nke Sun na-agbasa oke na oke na ogologo ntụgharị gburugburu PAR spectrum.
Dị dị iche iche nke Igwe Igwe. Rịba ama otú ọnụọgụ nke irradiance si dị elu na PAR / Visible spectrum.
Ọ bụ ezie na osisi nwere ike iji ụfọdụ ntụgharị ọkụ ọkụ na-abụghị ụdị PAR dị iche iche, ọkụ nke na-ada na mpụga nke a na-abụkarị ma ọ bụ dị oke ike ma ọ bụ na-esighi ike iji bụrụ isi ihe maka photosynthesis.
Dịka ọmụmaatụ, na ụfọdụ ewepu UV ọkụ bụ ihe na-ebibi ihe nke na a gaghị eji ya mepụta nnukwu ụmụ irighiri ihe, na infrared na aka nke ọzọ adịghị ike, na-ewepụta oke ọkụ. Site n'iji ya tụnyere, n'ime PAR foto ọ bụla nwere foto ọ bụla nwere ume zuru ezu iji kpalie elektrọn nke ụmụ irighiri ihe na-enweghị imebi cell.
Yabụ, kedu ka ụdịdị dị iche iche kwesịrị isi bụrụ? Kedu ụdị agba ọ bụla osisi chọrọ?
O di nwute, sayensị nwere azịza ya. Ọ na - apụta na mbipụta nke McCree (1972) gosipụtara maka anyị ihe niile ma bipụtara eserese yiri nke a:
Iji nweta ìhè, ahịhịa na-eji ụdị anya anyị dịtụ ochie ma na-arụpụta ihe nke ọma, bụ́ nke anyị na-akpọ pigmenti. Ngwongwo ihe ọkụkụ kachasị baa ụba bụ chlorophyll ma a na-eji ya nke ọma iji jide ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ. Ndị ọzọ karịa ndị ahụ, enwere ọtụtụ pigmenti ndị ọzọ, gụnyere carotenes na xanthophylls nke na-ewe ihe ọkụ ọkụ na ntụgharị ndị ọzọ wee nyefee ya usoro usoro foto.
Ekwesiri igosi ya na ndu ndu na-abanye n'ime ime ahihia karie uhie uhie ma nwee ike ichikota photosynthesis nke oma. Nke a bụ n'ihi na akwa oyi akwa nke chloroplasts nke nwere chlorophyll na-ejupụta ebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na odo nwere ike ịbanye n'ime miri n'ime anụ ahụ ma na-egosipụta gburugburu ruo mgbe chloroplast ọzọ nwere chlorophyll ma ọ bụ site na ngwa ngwa.
Ugbu a na ị ghọtara sayensị n’azụ ndị LED zuru oke, lee ihe ndị kachasị mkpa ịchọrọ ịtụle mgbe ị na-ekpebi nke ị ga-azụ.
Ugbu a, ọkụ ọkụ na-eto eto zuru oke dị oke ọnụ. Ọnụ ego nke ịtọ ntọala usoro dabere na ọkụ ndị a nwere ike ịdị oke ọnụ karịa ọkọlọtọ HPS ma ọ bụ ntọala HID.
Agbanyeghị, ị ga-echekwa nnukwu ego na ogologo oge n'ihi arụmọrụ nke LEDs vs. HID lamp. Iji maa atụ, Nkezi ndụ ha otu bọlbụ HPS dị ihe dị ka awa 10,000. Tụlee nke a na ndụ elekere 50,000 maka LEDs ma ị nwere ike ịhụ ego akwụ ụgwọ ị ga-agbakọ na oge.
otú e si akụ enyí ntị bulbs na containers
Nwere ike ịgba ọsọ ntọala LED zuru ezu maka afọ 15 tupu ịkwesịrị ịtụle iji dochie ya. Yabụ, na nkenke: ọ bụrụ na ịnwere ike ịkwụ ụgwọ ntọala mbụ, ị ga-ekele onwe gị ogologo oge.
Otutu ihe nkpuchi HID ma obu CFL buru ibu ma buru ibu. Nke a adịchaghị njọ, mana ọ bụrụ na ị na-achọ itolite na obere oghere ọ nwere ike ịme ka ọ sie ike. Ngwakọta ụdịdị dị iche iche zuru oke dị obere ma anaghị achọ ballasts ma ọ bụ ihe ngosi, na-ahapụ ohere na gị too ulo-ikw tent ma ọ bụ na-eto eto ụlọ.
Ìhè na okpomọkụ na-ejikọta ibe ha ruo mgbe ebighị ebi. Ọnọdụ okpomọkụ nke ime ụlọ gị na-eto eto na-agbanwe agbanwe, ọkụ ọkụ na-eto eto bụ otu n'ime ndị na-eme ka akụ gị na-arị elu. Ọ bụ ihe kpatara ya eto ikuku ventilashion dị ezigbo mkpa.
Igwe ọkụ LED zuru oke enweghị nsogbu a n'agbanyeghị. Fọdụ ndị na-eto eto ga-eme ka ụlọ ha kpoo ụlọ ha n'oge ọ bụla n'ihi ọnwa ole na ole n'ihi ọkụ ọkụ si n'ụdị ọkụ a. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ị na-etolite na ihu igwe na-ekpo ọkụ, ị gaghị echegbu onwe gị banyere ikpo oke ọkụ ụlọ gị.
Ọ bụrụ na ị na-agụ isiokwu a, ohere dị mma na ị kpebielarị iji usoro nhazi LED zuru ezu na ụfọdụ nhọrọ ọkụ ndị ọzọ dị na ya. Otú ọ dị, ọ ka bara uru ịme ngwa ngwa na iche ngwa ngwa megide teknụzụ ọkụ ndị ọzọ.
ole ohere ka osisi tomato chọrọ
Full ụdịdị dị iche iche Ikanam
Ọnụ Elu Ọkara Ọkara Elu Ala
Mmepụta Okpomọkụ Ala Elu Elu Elu Ala
Ọdịdị zuru ezu Eeh Mba Mba Eeh Mba
Nha Obere Nnukwu Nnukwu Nnukwu Obere
Afọ ndụ 50,000 15,000 15,000 20,000 10,000
Mgbe ị na-atụnyere ndị LED na HID, ị na-atụle n'ezie maka ụdị ọkụ atọ dị iche iche: sodium dị elu (HPS), metal halide (MH), na seramiiki metal halide (CMH).
Full ụdịdị dị iche iche LEDs vs. High Pressure Sodium
Ke ofụri ofụri, HPS n'ọnụ ndị zuru ụdịdị dị iche iche setups na-eri, ma tụfuru na okpomọkụ mmepụta na ikike na-eto eto site na ndụ nke osisi.
Igwe ọkụ zuru oke
Obere okpomọkụ mmepụta
Nwere ike itolite na usoro ndụ ndụ niile
Obere ihe na-agwụ ike
Akwa Nrụgide Sodium
Mmepụta ọkụ dị elu
Kachasị maka okooko frasi
Chọrọ ballast na ngosiputa
Igwe ọkụ zuru ezu vs. Metal Halide
Na mkpokọta, MH dị mma maka usoro ahịhịa na-akwụ obere ụgwọ, mana na-ewepụta oke ọkụ ma ọ naghị arụ ọrụ nke ọma maka osisi site na ndụ ya niile. Ọ bụrụ na ị na-eto naanị mkpụrụ osisi ahịhịa n'agbanyeghị, ọ nwere ike rụọ ọrụ nke ọma.
Kachasị maka vegetative frasi
Full LED dị iche iche LEDs vs. Ceramic Metal Halide
Ọkụ CMH bụ ihe kacha mma HID na-agba mgba vs. LED zuru oke. Ha weputara uzo di nma ma nye kwa onu ahia ya na ihe ozo di nma. Ọ bụ ebuli elu ebe a.
Yiri ego na nhazi CMH
Obere okpomọkụ mmepụta karịa a CMH
Arụmọrụ dị elu
Ceramic Metal Halide. Nnukwu Mgba
Chọrọ ballast pụrụ iche
Dị oke ọnụ karịa HID ndị ọzọ
Nwere ike itolite site na usoro ndụ ihe ọkụkụ
Igwe ọhụụ zuru ezu vs. Kọmpat Fluorescent
CFLs, ọ bụ ezie na ha arụ ọrụ nke ọma, kachasị mma maka usoro ahihia nke ahịhịa. Nke a bụ n'ihi na ha n'ozuzu ha anaghị emenwu nnukwu ike nke ọkụ na ụdịdị dị mma maka ahịhịa ga-eme nke ọma n'oge okooko osisi.
Ọ dị oke ọnụ
Ìhè ka mma
Ọ dị mma maka uto ahihia
Fluence SPYDRx bụ ihe ị ga - enweta mgbe ụlọ ọrụ na - ewere igwe eletriki LED zuru oke ma na - etinye nlezianya nyocha sayensị na usoro nhazi nke ọma na ya.
Ọ bụ otu n'ime sistemụ ikanam na-ele anya na-ahụkarị nke m hụrụ n'onwe m, ma ewezuga nke ahụ na-arụ ọrụ dị elu.
Nyocha nyocha nke Fluence SPYDRx
Ikpeazụ Were : Ọ bụrụ na ịnwere ego ị ga-eji bulie elu nke akara zuru oke, ị gaghị ahụ ọnụahịa ka mma karịa Fluence SPYDRx.
mgbidi n'ịnyịnya ubi sooks ukwu ukwu reviews
California Lightworks SS550 SolarSystem 550 LED Light, 440W, RED
88 Super High Flux US mere 5 Watt ikanam emitter ...
Ejiri 2 X 15 Watt UV-B T8 tubes nwee iche ...
Edo 90 ogo ọla mma iko isi ...
California Lightworks bụ onye a ma ama na-emepụta ọkụ horticultural ma na-ewepụta sistemụ ọkụ dị mma n'oge a. Ọ bụ ezie na ọ naghị emeri ọtụtụ isi 'flashy' dịka ihe kachasị mma m na-ahọrọ, ọ bụ ntọala siri ike zuru oke zuru oke nke ga-arụ ọrụ maka ọtụtụ osisi ị na-achọ itolite.
Nke a bụ mmebi nke ụdịdị dị iche iche:
Blue dị omimi: 440nm
Miri emi Red: 665nm
White na-ekpo ọkụ: 3100k
Ikpeazụ Were : Ọ bụrụ na ịchọrọ sistemụ siri ike, nke emere nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma nke agaghị emebi akụ, soro CLW Solarstorm 440 gaa.
gịnị bụ ọrụ ebube na-eto eto mere si
esi kụrụ mkpụrụ moringa
esi ohere akwụkwọ nri na a bed bed
nwere ike bug zapper na-ekpe na mmiri ozuzo